Foibe FJKM: 44 taona niasana Andrianambinintsoamanitriniaina | NewsMada
Foibe FJKM: 44 taona niasana Andrianambinintsoamanitriniaina
Olon-tsotra, saingy nahavita be tamin’ny asa fanompoana an’Andriamanitra, eo anivon’ny sahan’ny FJKM, Rakoto Andrianambinintsoamanitriniaina Armand. Nanomboka ny taona 1969 ny nanolorany ny tenany ho an’ny fampandrosoana ny asan’Andriamanitra. Nosantariny tamin’ny fampianarana izany. Avy eo, anisan’ny mpikambana tao amin’ny birao foiben’ny FJKM ny tenany. Nolaniny tamin’ny fitantanana ny kolejy Paul Minault kosa ny 10 taona farany.
Araka izany, manamarika ny 44 taona niasana amin’ny fiangonana Rakoto A. Armand. Tsy nandalo fotsiny izany jobily lehibe izany fa nomarihina tamin’ny hetsika samihafa. Natao tamin’ny volana oktobra 2017 ny fanokafana. Ny volana marsa lasa teo kosa ny ivon’ny fankalazana.
Ho famaranana kosa, hisy ny fotoam-pivavahana lehibe ny alahady tolakandro izao, etsy amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. “Fisaorana an’Andriamanitra noho ny amin’ny asa nampanaoviny ahy io, sady fankasitrahan’ny mpanompony Azy”, hoy ny fanazavan-dRakoto Andrianambinintsoamanitriniaina Armand. Homarihina amim-pomba ofisialy, amin’io fotoana io, koa ny fandehanany misotro ronono, araka ny fanazavany hatrany.
“Fa manana izao rakitra izao amin’ny vilany tany izahay mba ho an’Andriamanitra ny halehiben’ny hery fa tsy ho avy aminay”. Io tenin’ny soratra masina, ao amin’ny II Korintianina 4:7, io no teny faneva nosafidiny amin’izao jobily lehibe izao.